Mitantana CTA na doka amin'ny WordPress | Martech Zone
Mitantana CTA na doka miaraka amin'ny WordPress
Alatsinainy Desambra 30, 2013 Zoma, Desambra 1, 2017 Douglas Karr
Izahay dia mitambatra amin'ny fividianana doka amin'ny tranokalanay - ao anatin'izany ny sora-baventy miantso ny hetsika fampiroboroboana ny serivisinay, dokam-barotra ifandraisan'ny orinasa atokisanay, ary dokam-barotra tohananay amin'ireo orinasa nofidinay hiara-miasa aminy. Somary saro-pantarina ireo fitambaran'ireo fonosana samihafa, noho izany dia nampidirinay amina lohahevitray ny doka hitantanana ny doka aseho.
Miaraka amin'ny Safidy fahitana an'i Jetpack miaraka amina widgets, mametraka antso-to-hetsika na doka ilaina na dinika dia mora tanterahina amin'ny WordPress ankehitriny. Ny tranokalanao WordPress dia mety tsy manolotra doka ivelany na mitaky ny safidy ataonay. Raha ny marina dia mety te hitantana ny CTA anao fotsiny ianao. AdPress dia plugin WordPress namboarina manokana ho an'ity.
AdPress dia plug-in premium hitantanana Ads. Sehatra matanjaka sy asongadiny feno hivarotana sy hanehoana doka ho an'ny bilaoginao WordPress:
Easy Setup - Mamorona fanentanana amin'ny tsindry vitsivitsy miaraka amin'ny AdPress Ad Designer. Farito ny fomba hanehoanao ny doka, ny doka Call To Action, ny fifanarahana amidy… Ny fampidirana ny faritry ny doka ao amin'ny bilaoginao dia tsotra be. AdPress dia manana ny widget, ny kaody fohy ary ny fanohanana ny asany.
Fivarotana mandeha ho azy - Misoratra anarana ny mpampiasa ary mividy Spots Ad amin'ny dashboard momba azy ireo. Ny fandoavam-bola dia raisina ho azy amin'ny PayPal. Rehefa mividy ny mpampiasa dia ampandrenesina ao amin'ny dashboard anao izy ary azonao atao ny manaiky na mitsipaka ny doka-dry zareo. Manohana anao koa ny famerenam-bola PayPal.
Ad Analytics - Ad Stats dia azo idirana ho an'ny Admin sy ny mpanjifa nividy ny doka. AdPress dia manome statistika amin'ny antsipiriany miaraka amin'ny CTR, Averages ary tabilao mahafinaritra.
Tantara, fanafarana / fanondranana, fanamboarana - AdPress dia mirakitra ny tantaran'ny fividianana doka tsirairay. Izy io koa dia manana endri-javatra Import sy Export mahery izay mamerina ny tahiry rehetra na ny ampahany amin'ny angon-drakitrao amin'ny rakitra fisintomana. Ny doka AdPress dia azo namboarina tanteraka. Ny kaody HTML sy CSS namboarina ho an'ny doka dia azo ovaina avy amin'ny tontonana fikirana.
Fanampiana sy fanohanana - AdPress dia miaraka amina rakitra fanampiana feno antsipiriany. Manolotra fanohanana haingana be koa izy ireo (forum + mailaka). Manantena valiny ao anatin'ny iray na roa andro.
Ampiasao ny rohy mifandray ary afaka manao izany ianao misintona AdPress ho an'ny tranokalanao amin'ny $ 35 fotsiny. Ny plugin dia manana isa ambony ary fividianana efa ho iray alina hatreto.
Tags: mpitantana dokaadpressmpitantana ny fampielezan-kevitrampitantana doka wordpressmpitantana ny fampielezan-kevitra wordpressplugin WordPress